Kukhethwe irayisi ekumgangatho ophezulu, ithontsi ngalinye leviniga lisempilweni kwaye likhuselekile
Endaweni yeswekile emhlophe, iviniga yerayisi edityaniswe nobusi idityaniswe ngononophelo ukwenza incasa imuncu kwaye iswiti kwaye ivumba ngakumbi.
Ixesha elaneleyo lokuvumba kwendalo, ubugcisa bexesha kunye nobuchule kunye.
I-asidi ye-asidi, incasa emnandi, ilungele ukupheka imifuno kunye nokutya kwaselwandle, isaladi ebandayo, ukudipha ekutyeni.
Ibhotolo yamandongomane 340g
Ubunewunewu obucekeceke, incasa etyebileyo yamandongomane
Incasa entle, incasa yamandongomane atyebileyo kunye nokusebenza kakuhle kokusebenza
Ibhotolo yamandongomane kukuncamathelisa ukutya okanye ukusasaza okwenziwe emhlabeni, amandongomane aqhotsiweyo. Umbala webhotolo yamandongomane u-tyheli omthubi, uburhabaxa obuhle, ubumnandi, kunye nevumba elomeleleyo lamandongomane, hayi ukungunda, hayi iintshulube. Ipeanut butter isetyenziswa ikakhulu njengesidlo sasemini sokutya kubantwana besikolo. Ikwasetyenziswa njengesixhobo sokuqhekeza, iisendwitshi, iikeyiki ezinencasa yamandongomane, izinto ezibhakiweyo, iilekese, ukutya okuziinkozo kwasekuseni, kunye ne-ayisi khrim, njl. E kunye neeminerali. Ityebile ngezakhamzimba kwaye inencasa eyahlukileyo.
Umtya weHawthorn, Ukutya amandongomane anetyuwa, Intonga yeBhontshisi entsha, Ikhukhi yeLadyfinger, Iibhiskithi zaBantwana, Iipakethi zesosi yeSoy,